Hanti Dhawrka Guud ee Somaliland Baadhaya Wasaaradaha Dalka
Hargeysa(RH)Hanti dhawrka guud ee Qaranka Somaliland ayaa baadhis culus ka bilaabay Qaar ka mida wasaaradaha Dalka ,waxaana uu Hanti dhawrku uu kala wareegey buugtii iyo Faylalkii wasaaradaha yaalay,waxaana Arintani ay wal-wal ku Abuurtey masuuliyiinta ugu saraysa wasaaradaha baadhista lagu sameeyey,kuwaas oo qaarkood dalka dibadiisa u Goosteen.
Xogaha nasoo gaadhaya ayaa waxay tibaaxeen in hanti dhawrku maalmihii u danbeeyey ay baadhis culus ku sameeyeen isla markaana ay galalafeen wasaaro dhawr ah oo ay kamid yihiin Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare,Wasaaradda Kalluumaysiga,Wasaarada Caafimaadka iyo wasaarado kale iyo Qaar ka mid ah hay’addaha Dowlada.
Waxaana hanti dhawrku uu wasaaraddahaasi kala wareegay buugaagtii iyo faylashii wasaaradaha ay lacagaha xisaabaadku ugu qornaayeen,waxaana sidoo kale maanta iyo dhawrka maalmood ee soo socdaba ay baadhis xoogan ku samaynayaan wasaarado kale.
waxaana sidoo kale Hanti dhawrku maalmaha soo socdaa baadhis xoogan ku samayn doona wasaarado ay kamid yihiin sida xoguhu tibaaxeen wasaarada Hawlaha Guud iyo gaadiidka,Wasaarada Macdanta iyo Tamarta,wasaaradda Deegaanka iyo wasaarado kale.
Hanti dhawrka Qaranka ayaa waxa laga war sugayaa natiijada ay ka soo saaraan baadhistan xoogan ay wadaan iyo in ay shaaca ka qaadaan wasaaradaha lagu qabtay musuqa tan iyo intii xukuumadda madaxwayne Siilaanyo talinaysay,taas oo waliba wakhtigan kala wareega ahna uu aad u xoogaysto musuqu.
arrinkan ayaa kusoo beegmaya wakhti kala Guura oo laba madaxwayne xilka dalka la kala wareegayaan, waxaana shacabku u dhag taagayaan Go”aanka ay soo saaraan Hanti Dhawrka Qaranku.